Soosaarayaasha dhoobada dhalaalaya | Shiinaha glaze Shirkado dhoobada & Warshad
Casho glack glaze la dhigay
Sharaxaad: Casho glack glaze set
Waxyaabaha: Qalabka dhagaxa
Glaze glaze waa mid ka mid ah dhalaalka dhalaalka midabka.
Sidoo kale waa dhalaal khaas ah maxaa yeelay waxaa jira khadad yar yar oo dildilaac ah oo dusha sare ka sameysan dhoobada, laakiin jirka gudihiisa ma dillaacsana. Khadadka dildilaaca ayaa qurxin gaar ah ku leh sheyga.
Midabka hal abuurka ah ee cashada dhalaalaya
Muraayadda hal-abuurka leh waa mid ka mid ah dhalaalka midab khaas ah, warshadda ayaa ku dari doonta qaar ka mid ah walxaha birta birta midabka dhalaalaya, midabka dhalaalka midabkuna wuxuu muujinayaa midab kala duwan oo la yaab leh oo ay sameeyeen Oxidation ama Reduction Reeduction in Tunnel. Maaddaama tani ay tahay falcelin kiimikaad iyo falcelinta oksidheer, qofna ma oga in dhalaalka uu muujinayo midabka & kalgacalka inta lagu jiro xabbadda. Marka dhalaalka aan ugu yeerno HAL IYO KELIYA midab dhalaal.
Hadda waxaan sidoo kale abuurnay hal kalgacal oo dusha sare ah, waxaan ugu yeernay Speckle color glaze, waxay ku tusi kartaa dhibcaha yaryar ee dusha sare markaad taabato wax soo saarka gacanta.
midab dhalaalaya oo dhalaalaya + casaan gacmeed casho goglan-qaabab
Glaze color glack waa nooc ka mid ah glaze hal abuur leh; waa farsamo gaar ah, warshaddee ku dari doonta xoogaa walxaha birta ah dhalaalka midabka dhalaalaya, ka dibna dahaadhka qarka. Midabka dhalaalka midabku wuxuu ku tusi doonaa midab cajaa'ib kala duwan Oxidation ama Dhimista oo lagu rido foornada Tunnel. Maaddaama tani ay tahay falcelin kiimikaad iyo falcelinta oksidheer, qofna ma oga in dhalaalka uu muujinayo midabka & kalgacalka inta lagu jiro xabbadda. Marka dhalaalka aan ugu yeerno HAL IYO KELIYA midab dhalaal.
midab casho glaze set-Flat qaab
Waxyaabaha: Qalabka dhagaxa leh oo leh muraayad midab leh
Midabka dhalaalka ayaa isticmaala fiirsasho kala duwan si ay ugu ekaato qayb kala duwan sida qurxinta, warshadu waxay ka dhigi doontaa qaabka emboss ee caaryada, markaa, qaabka ayaa nuqul ka sameysan doona wax soo saarka. Waxay ku taaban kartaa khadka xariiqda gacanta.
midab glaze casho set-Hexagon qaab
Ururintaani waxay leedahay qaab gaar ah oo aan ahayn qaabka wareega caadiga ah laakiin leh qaab Hexagon, qaab Octagonal ah, qaab laba jibbaaran, iyo baaquli qaab biyo daadad ah. Waxay aad ugu habboon tahay isticmaalka fasaxa, sidoo kale waa hadiyad ahaan hadiyad ahaan. Waxaad dooran kartaa qaab kala duwan & u dhigma midab kala duwan sida hal go'an.
Emboss glaze color waa mid ka mid ah glaze midab khaas ah, warshadda ayaa ka dhigi doonta hanka emboss-ka caaryada, ka dib, qaabku wuxuu nuqul ka sameysan doonaa wax soo saarka. Waxay ku taaban kartaa khadka xariiqda gacanta.
Emboss midab glaze casho set-Coupe qaab